Home Wararka Dowlada Goboleedka Jubbaland oo mamnuucday in hub lagu dhexqaato Kismaayo
Dowlada Goboleedka Jubbaland oo mamnuucday in hub lagu dhexqaato Kismaayo
Dowlad Goboleedka Jubaland ayaa soo saartay awaamiir lagu mamnuucayo hubla lagu dhex qaato magaalada Kismaayo, “si loo xaqiijiyo amaanka magaalada” oo la filayo dhawaan in lagu qabto doorashada xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaliya ee laga doorto Jubaland.
Dhanka kale, afhayeenka Wasaarada Amniga Jubbaland Jaamac Axmed ` oo u waramayay VOA-da ayaa sheegay in awaamiirtaan loo soo saaray si loo xaqiijyo amniga doorashooyinka dalka gaar ahaan magaaladda Dekada leh ee Kismaayo.
“Ujeedo loo soo saaray amarka waa in la xaqiijo amniga magaaladda maadaama ay doorashooyin ka dhacayaan Kismaayo….hadii aan faahfaahiyo amarka waa in aan magaaladda lagu dhex wadan Karin hubka marka laga reebok an laamaha amniga masuuliyiinta dhamaantood waa u sheegnay” ayuu yiri Afhayeenka Wasaarada Amniga Jubbaland Jaamac Axmed Cali.
Jaamac, ayaa sheegay in ay go’aan si wadajir ah u soo saareen Wasiirka amniga Jubbaland, taliye-yaasha ciidanka maamulka iyo taliska milatariga Soomaaliya ee ka howlgala deegaanadda maamulka Jubbaland ee koofurta Soomaaliya.
Waxa uu intaas ku daary “Waxaa la go’aamiyay in askariga aan wadan ruqsad shaqo ama aan markaas shaqo ku jirin in asiga iyo qoriga la isku qabto markii OP-ga la qorana la xiriiro xerada uu ka tirsanaa sidaasna askariga loogu wareejiyo taliyihiisa si loola xisaabtamo”